Imibhalo ka-Andrew Gazdecki mayelana Martech Zone |
Imibhalo nge Andrew Gazdecki
U-Andrew Gazdecki ungumsunguli ne-CEO ye Izinhlelo zokusebenza ze-Bizness - Ukwenza izinhlelo zokusebenza zeselula zibize futhi zilula kumabhizinisi amancane. Siyi-platform yokuzenzela ye-iPhone, i-iPad, i-Android ne-HTML5 evumela noma yiliphi ibhizinisi elincane ukuthi ngasikhathi sinye lenze, lihlele, futhi liphathe izinhlelo zokusebenza zeselula ngaphandle kolwazi lohlelo oludingekayo.
Ukuqala Kanjani Ukubethela Ukwethulwa Kwabo Ekuzingelweni Komkhiqizo
NgoMgqibelo, Januwari 7, 2017 NgoMgqibelo, Januwari 7, 2017 Andrew Gazdecki
Inqubo yokwethulwa kokuqalisa kunoma iyiphi imboni isemhlabeni wonke: qhamuka nombono omuhle, yenze uhlobo lwedemo yayo ukubukisa, ukuheha abanye abatshalizimali bese uzuza uma usufike emakethe ngomkhiqizo ophelile. Vele, njengoba izimboni ziguqukile, kanjalo namathuluzi. Kuyinhloso yazo zonke izizukulwane ukuthola indlela entsha yokuqalisa ukuqala esweni lomphakathi. Izikhathi zangaphambilini zazithembele kubathengisi bendlu ngendlu, ukuthumela imiyalezo
Izibalo Zokuthengisa eziyi-19 ze-imeyili, Ucingo, Imeyili yezwi, Nokuthengisa Komphakathi
NgoLwesine, Novemba 10, 2016 NgoLwesithathu, Agasti 30, 2017 Andrew Gazdecki
Ukuthengisa yibhizinisi labantu lapho ubudlelwano bubaluleke kakhulu njengomkhiqizo, ikakhulukazi embonini yokuthengisa yesoftware. Abanikazi bamabhizinisi badinga umuntu abangathembela kuye kubuchwepheshe babo. Bazolisebenzisa leli qiniso, futhi balwele inani elingcono, kepha liyajula kunalokho. Umthengisi wokuthengisa nomnikazi we-SMB kufanele bazwane, futhi kubaluleke kakhulu kumthengisi wokuthengisa ukuze lokho kwenzeke. Akuvamile ukuthi i-